446s Aniga oo naftayda u helaya tiro ilko oo cusub (saddex saacadood oo keliyah) ayaa la beddelay-Edward Avila images and subtitles
Duulista Maanta ~~~~ Laba kabood Wada jir ah Leo Jay ~! ~ Cid kasta Guys, qof walba ~ Waxaan ahay Leo J. Baro Ingiriisiga maalmahan Marka codku waa sida robot Aad baan u daalanahay oo hurdo iyo hurdo la’aan awgood hurdo la'aantu awgeed. Annaga hadda Waxaan ku jiraa ilkaha saddex saacadood ah. 3 saacadood Waxaan moodayay inay caadi tahay ilkahayga ?? ㄴㄴ; Ilkahaagu runtii waxay u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan ?? Runtii taas ma dhihin waxaanan idhi ma xuma Wuxuu sheegay inuu qalloocan yahay oo jaale yahay Maxaad kaloo tiri? Waxaan idhi waxay u egtahay sidan Xaq? Waxaan is idhi kuma filna dhexda Hadda waa corona Marka, in la isku dayo Fikradda ayaa ah inaad ku qori karto saddex saacadood gudahood. Waxay umuuqataa inay qaadanayso 3 saacadood oo dheeraad ah Kiliinikada saacadaha 3.5 Laakiin garan maayo inay jiri doonaan farqi weyn Ma aanan isticmaalin bushimaha hore Haddii aad codsatid tan, ilkahaagu waxay u ekaan doonaan hurdi badan Haha * Maybine lipstick * Hahaha Sida muuska Weji waji Ilkaha i tus Dhexdaada waa cad cad Jaalaha dhamaadka Dambe Waxa dhakhtarku yidhi Waa wax aad u af badan halkan Iyo khadka Maaha jaakad iyo hagaagsan. Markaa waan qabanayaa Iyo xitaa midabka ilkaha Ugu horreyntii, waxaan moodayay inay iligga ooga shiraan Laakiin halkan, kiiskeyga Waa sida caarada ciddiyaha ee 'Dinging Diva'. Waxyar ka dib ilkaha dibedda Waxoogaa yar oo dusha sare ah Intii aan gashan lahaa sanaaci (ma xasuusan karo Crown) Daacadnimo ahaan, waxaan u maleynayaa ilkaha hoose inay yihiin dhibaatada ugu weyn Waan arki karaa markaan hadlayo Laakiin miyaan sixi karaa? Ah, uma muuqato inay keenayso balmal bushiman Waxa ilkaha hagaajiyaa waxay kujiraan saliid qoyaan ah gudaha, sidaa darteed si fiican ayey u sii ahaanayaan :) (Taasi) * Suuxinta gel + ka dib suuxinta qayb ahaan ah * Muuqaalkeyga: Niyaddayda: Tan ka hor Oo kanuna waa ka dib Cajiib Waxay u muuqataa sida manicure manate;; Waxay ila tahay inaan wax dul saari karo Waxay umuuqataa inaad sameysid borotiinada hada I caawi illaa uu dhammaystiro… iska joog… Miyaan iska tagi karaa guriga? Laakiin ma uusan aadin Xor ayaad u tahay inaad samayso wax kasta oo aad samayso muddo saddex saacadood ah Dib ugu fadhiiso meesha aad ku taallo ama u bax banaanka si aad u soo iibsato ama wax u cuntid Laakiin i Waxaan jeclahay inaan seexdo Real Im Si kale haddii loo dhigo, 3 saacadood ma dhaafin 7 saacadood ka hor Waan soo noqday waxaanan dareemayaa cusub !!! Waxaan dareemayaa inaan nadiif ahay oo aan nadiif ahay hada Wada sheekeysi Maxaa ka duwan Waxay ahayd todobaad Ma waxaad dareemaysaa sida aan hadda ahay? Waan ku bartay Halkii aad ka dareemi lahayd in wax ilkahaaga ku jiraan Waxaan doonayaa inaan isku dayo qaar ka mid ah alaabooyinka bushimaha Waxaad arki kartaa ilkaha hoostooda Iyo markii dib loo eegayo sheyga dibnaha asalka ah Si fiican uma qoslin. Sida tan oo kale Waxaan tegayaa midab adag oo waxaan ku dhex dhigi doonaa wax aan caadi aheyn Kaliya si gaar ah uma jirin Gacaliye Dalia Blooming Edition Lip Paradise Sheer Dew Tinted Lipstick Midabka Olivia K-quruxdu waxay eryaysaa dad badan Magacyada midabku waa dhamaan magacyada gabadha cad Xitaa haddii ay sheegto midabkeedu yahay, anigu garan maayo waxay caadi tahay Halkaas ayaad aadaysaa Olivia Brenda ama Shallot Wow ... Dhalaalaya Kani waa astaan ​​loo yaqaan Hens Tani waa mid ka mid ah noocyada cusub ee K-quruxda Maalmahan, dhalinyaro ayaa jecel Midab 'Dalbo jilicsan' Tani waa mid bilaa lacag ah Qalin cad oo cudbi ah Tulips beige oo yaraaday Midabbadu waa isku mid. Ugu dambeyntii Aynu u tagno wax xiiso leh waqtigan. Aynu sameyn karno Dayax-gacmeedka ~! Soo Saarida Dayalor ee Midabaynta "lorlor " Midabka 'Usagi' Kansar malahan gudaha
Aniga oo naftayda u helaya tiro ilko oo cusub (saddex saacadood oo keliyah) ayaa la beddelay-Edward Avila
< start="0" dur="0.98"> Duulista >
< start="0.98" dur="3.72"> Maanta ~~~~ Laba kabood >
< start="5.12" dur="1.7"> Wada jir ah Leo Jay ~! ~ >
< start="6.82" dur="1.4"> Cid kasta >
< start="9.2" dur="1.96"> Guys, qof walba ~ Waxaan ahay Leo J. >
< start="12.86" dur="1.94"> Baro Ingiriisiga maalmahan >
< start="14.8" dur="2.24"> Marka codku waa sida robot >
< start="17.04" dur="4.5"> Aad baan u daalanahay oo hurdo iyo hurdo la’aan awgood hurdo la'aantu awgeed. >
< start="21.54" dur="1.18"> Annaga hadda >
< start="23.14" dur="1.62"> Waxaan ku jiraa ilkaha saddex saacadood ah. >
< start="27.2" dur="0.76"> 3 saacadood >
< start="28.36" dur="1.7"> Waxaan moodayay inay caadi tahay ilkahayga ?? >
< start="38.56" dur="1.68"> Ilkahaagu runtii waxay u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan ?? >
< start="40.24" dur="2.18"> Runtii taas ma dhihin waxaanan idhi ma xuma >
< start="42.42" dur="3.34"> Wuxuu sheegay inuu qalloocan yahay oo jaale yahay >
< start="50.16" dur="2.1"> Maxaad kaloo tiri? >
< start="53.32" dur="1.2"> Waxaan idhi waxay u egtahay sidan >
< start="54.52" dur="0.5"> Xaq? >
< start="55.02" dur="1.46"> Waxaan is idhi kuma filna dhexda >
< start="57.9" dur="0.9"> Hadda waa corona >
< start="58.8" dur="1.16"> Marka, in la isku dayo >
< start="59.96" dur="4.72"> Fikradda ayaa ah inaad ku qori karto saddex saacadood gudahood. >
< start="64.68" dur="1.96"> Waxay umuuqataa inay qaadanayso 3 saacadood oo dheeraad ah >
< start="69.54" dur="1.86"> Kiliinikada saacadaha 3.5 >
< start="75.98" dur="3.42"> Laakiin garan maayo inay jiri doonaan farqi weyn >
< start="80.96" dur="1.98"> Ma aanan isticmaalin bushimaha hore >
< start="85.38" dur="2.46"> Haddii aad codsatid tan, ilkahaagu waxay u ekaan doonaan hurdi badan >
< start="102.88" dur="2.18"> * Maybine lipstick * >
< start="107.12" dur="2.34"> Hahaha Sida muuska >
< start="109.46" dur="0.96"> Weji waji >
< start="114.96" dur="0.58"> Ilkaha i tus >
< start="117.46" dur="3.28"> Dhexdaada waa cad cad >
< start="120.74" dur="1.56"> Jaalaha dhamaadka >
< start="139.96" dur="1.32"> Dambe >
< start="147.86" dur="1.3"> Waxa dhakhtarku yidhi >
< start="151.24" dur="1.4"> Waa wax aad u af badan halkan >
< start="152.64" dur="1.94"> Iyo khadka >
< start="156.06" dur="2.6"> Maaha jaakad iyo hagaagsan. >
< start="158.66" dur="1.62"> Markaa waan qabanayaa >
< start="160.28" dur="2.58"> Iyo xitaa midabka ilkaha >
< start="162.86" dur="6.38"> Ugu horreyntii, waxaan moodayay inay iligga ooga shiraan >
< start="169.24" dur="2.16"> Laakiin halkan, kiiskeyga >
< start="171.4" dur="4.32"> Waa sida caarada ciddiyaha ee 'Dinging Diva'. >
< start="175.72" dur="2.12"> Waxyar ka dib ilkaha dibedda >
< start="177.84" dur="1.82"> Waxoogaa yar oo dusha sare ah >
< start="179.66" dur="1.7"> Intii aan gashan lahaa sanaaci (ma xasuusan karo Crown) >
< start="181.36" dur="3.5"> Daacadnimo ahaan, waxaan u maleynayaa ilkaha hoose inay yihiin dhibaatada ugu weyn >
< start="184.86" dur="2.06"> Waan arki karaa markaan hadlayo >
< start="186.92" dur="2.88"> Laakiin miyaan sixi karaa? >
< start="189.8" dur="1.72"> Ah, uma muuqato inay keenayso balmal bushiman >
< start="194.98" dur="2.6"> Waxa ilkaha hagaajiyaa waxay kujiraan saliid qoyaan ah gudaha, sidaa darteed si fiican ayey u sii ahaanayaan :) >
< start="197.58" dur="0.84"> (Taasi) >
< start="204.7" dur="2.84"> * Suuxinta gel + ka dib suuxinta qayb ahaan ah * >
< start="207.54" dur="1.6"> Muuqaalkeyga: >
< start="209.14" dur="1.64"> Niyaddayda: >
< start="210.78" dur="1.64"> Tan ka hor >
< start="212.86" dur="1.12"> Oo kanuna waa ka dib >
< start="214.76" dur="0.88"> Cajiib >
< start="215.64" dur="1.74"> Waxay u muuqataa sida manicure manate;; >
< start="217.38" dur="2.06"> Waxay ila tahay inaan wax dul saari karo >
< start="220.02" dur="1.94"> Waxay umuuqataa inaad sameysid borotiinada hada >
< start="222.52" dur="2.72"> I caawi illaa uu dhammaystiro… iska joog… >
< start="225.24" dur="0.94"> Miyaan iska tagi karaa guriga? >
< start="226.18" dur="2.06"> Laakiin ma uusan aadin >
< start="228.24" dur="2.88"> Xor ayaad u tahay inaad samayso wax kasta oo aad samayso muddo saddex saacadood ah >
< start="231.12" dur="3.68"> Dib ugu fadhiiso meesha aad ku taallo ama u bax banaanka si aad u soo iibsato ama wax u cuntid >
< start="234.8" dur="2.64"> Laakiin i >
< start="237.44" dur="2.06"> Waxaan jeclahay inaan seexdo >
< start="250.58" dur="2.32"> Si kale haddii loo dhigo, 3 saacadood ma dhaafin >
< start="252.9" dur="1.98"> 7 saacadood ka hor >
< start="254.88" dur="3.12"> Waan soo noqday waxaanan dareemayaa cusub !!! >
< start="275.68" dur="2.3"> Waxaan dareemayaa inaan nadiif ahay oo aan nadiif ahay hada >
< start="299.76" dur="0.62"> Wada sheekeysi >
< start="310.02" dur="1.84"> Maxaa ka duwan >
< start="312.66" dur="1.12"> Waxay ahayd todobaad >
< start="313.78" dur="2.14"> Ma waxaad dareemaysaa sida aan hadda ahay? Waan ku bartay >
< start="315.92" dur="2.52"> Halkii aad ka dareemi lahayd in wax ilkahaaga ku jiraan >
< start="318.44" dur="2.06"> Waxaan doonayaa inaan isku dayo qaar ka mid ah alaabooyinka bushimaha >
< start="320.5" dur="2.4"> Waxaad arki kartaa ilkaha hoostooda >
< start="322.9" dur="2.64"> Iyo markii dib loo eegayo sheyga dibnaha asalka ah >
< start="325.54" dur="2.44"> Si fiican uma qoslin. >
< start="327.98" dur="1.04"> Sida tan oo kale >
< start="331.58" dur="3.18"> Waxaan tegayaa midab adag oo waxaan ku dhex dhigi doonaa wax aan caadi aheyn >
< start="334.76" dur="1.16"> Kaliya si gaar ah uma jirin >
< start="335.92" dur="4.08"> Gacaliye Dalia Blooming Edition Lip Paradise Sheer Dew Tinted Lipstick >
< start="340.6" dur="0.8"> Midabka Olivia >
< start="341.4" dur="2.66"> K-quruxdu waxay eryaysaa dad badan >
< start="344.06" dur="3.66"> Magacyada midabku waa dhamaan magacyada gabadha cad >
< start="347.72" dur="2.64"> Xitaa haddii ay sheegto midabkeedu yahay, anigu garan maayo waxay caadi tahay >
< start="350.36" dur="0.68"> Halkaas ayaad aadaysaa >
< start="351.66" dur="0.96"> Brenda ama >
< start="361.08" dur="0.76"> Dhalaalaya >
< start="372.2" dur="1.66"> Kani waa astaan ​​loo yaqaan Hens >
< start="373.86" dur="2.18"> Tani waa mid ka mid ah noocyada cusub ee K-quruxda >
< start="376.04" dur="2.9"> Maalmahan, dhalinyaro ayaa jecel >
< start="378.94" dur="2.76"> Midab 'Dalbo jilicsan' >
< start="395.2" dur="1.52"> Tani waa mid bilaa lacag ah >
< start="396.72" dur="2.56"> Qalin cad oo cudbi ah >
< start="399.28" dur="2.34"> Tulips beige oo yaraaday >
< start="406.14" dur="1.92"> Midabbadu waa isku mid. >
< start="420.9" dur="0.76"> Ugu dambeyntii >
< start="421.66" dur="1.32"> Aynu u tagno wax xiiso leh waqtigan. >
< start="422.98" dur="1.22"> Aynu sameyn karno Dayax-gacmeedka ~! >
< start="424.2" dur="2.54"> Soo Saarida Dayalor ee Midabaynta "lorlor " >
< start="427.44" dur="0.88"> Midabka 'Usagi' >
< start="444.02" dur="1.92"> Kansar malahan gudaha >